20 Sep 2018 . 6:11 PM
ရန်ကုန်မှာ Hot Pot ဆိုင်တွေမှိုလိုပေါက်လာတဲ့အထဲ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ထိမိပြီး၊ အသားကောင်းကောင်း၊ ပစ္စည်းကောင်းကောင်းသုံးတဲ့ မခိုမကပ်အရသာကောင်းကောင်း Hot Pot ဆိုင်ဆိုတာ ရှာရသိပ်ခက်တာပဲ။
ဒီကြားထဲ မထင်ရင်မရင်သလို ပစ္စည်းပြတ်တာ၊ အသားမစုံတဲ့အချိန်တွေ စားမိရင် ပေးရသလောက်မတန်တဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်မိကြတယ်မလား?
ဒီ Hot Pot ဆိုင်ကတော့ Hot Pot ဆို ဈေးကလည်း ကိုယ်လိုက်မီအောင် သက်သာရမယ်။ အဝစားလည်း စားချင်တယ်။ အသားတွေဆိုလည်း တကယ့် အလျင်မပြတ်အောင်ဖြည့်ပေးတယ်။ အရသာလည်း မဆိုးဘူး။
အဓိကက အသားကောင်းတွေသုံးထားပေးတယ်…ဆိုတော့ကာ Hot Pot ဆိုင်ကောင်းကောင်းလို့ ညွှန်းရမယ့်အထဲ ပါတဲ့ဆိုင်လေးဆို စိတ်ဝင်စားကြမလား?
ဒီတပတ်အခရာ က ညွှန်ပေးချင်တာက လူတိုင်း တော်တော်များများ စားဖူးပြီးတိုင်းကြိုက်ကြတဲ့အပြင် ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးအောင်မြင်နေတဲ့ Hot Pot ဆိုင်ပါ။
ဒီ Hot Pot ဆိုင်ကို ကြွေရတဲ့အချက်တွေဆိုရင်-
အသားတွေ အမယ်များပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရှိတာက စညွှန်ရမှာပဲ။ ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ အသားလွှာတွေ၊ အသားနှပ်တွေ၊ အသည်းတွေက အစရတယ်ဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဪ…ပြီးတော့ အကုန်လုံးက လတ်နေတာပဲ။ Hot Pot ထဲထည့်သောက်ဖို့ ခပ်ပါးပါးလေးဆိုတော့ ရှယ်ပဲ။
အသားလုံးအကောင်းစားတွေ များတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြက်သားလုံး၊ ဝက်သားလုံးတွေ၊ ကြက်မှိုလုံး၊ ဝက်မှိုလုံးတွေ၊ အသားချောင်းတွေ၊ အစာသွပ်ဥလုံး တော်တော်များများစုံစိနေရော။ ဒါအဝစားနော်။ ကြိုက်သလောက်စားပဲ။
အရွက်တွေတော်တော်များများစုံတယ်။ ရွှေပဲရွက်တို့လို အရွက်တွေပါပါသေး။ မှိုတွေလည်းပါတယ်။
Side Dish တွေ ဗုန်းဗောလအောပေးထားတယ်။ ပုစွန်တန်ပူရာကြော်တဲ့၊ ဝက်ဆီကြော်တဲ့။ ထမင်းကြော်။ ခေါက်ဆွဲကြော်။ ဖက်ထုပ်ကြော်၊ ကြက်တောင်ပံချိုစပ်ကြော်၊ မန်ထိုကြော် အဓိကက Side Dish ကိုက အစမခိုထားဘူး။
ဖျော်ရည်တွေ ရွေးစရာများတယ်။ အချိုပွဲဆို တရုတ်အချိုပွဲရှိတယ်။ ကျောက်ကျော၊ ရေခဲမုန့် စားကောင်းတယ်။
အဓိက သဘောကျမိတာက အရည်ရွေးစရာများတယ်။ ရေသာသာ အရသာမျိုးမဟုတ်ဘဲ နဂိုအရည်ကိုက အရသာကောင်းတယ်။ မီဆိုဟင်းရည်နဲ့ တုန်ယမ်းတော့အသောက်များကြတယ်။ အိုးကိုတစ်ယောက်တစ်အိုးပေးတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေက အချိန်ပြည့်ဘေးကနေ လိုတာဖြည့်ပေးတယ်။ တကယ့်ကိုအဆင့်မီမီစားရတဲ့ဆိုင်ပါပဲ။
နေရာအနေအထားနဲ့ဆို ရိုးရိုးပါပဲ။ အဆင်မပြေတာကတော့ ယင်ကောင်တွေ ဘယ်ကမှန်းမသိ ဝင်ဝင်လာတာပဲ။
ဒီဆိုင်လေးနဲ့ နာမည်ကို ထုတ်ပြောပြရမယ်ဆို Shopping Center တွေမှာ ဆိုင်တွေအများကြီးနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ Jo Jo Hot Pot ပါ။ တစ်ခါမှ စိတ်ထဲ ကောင်းမယ်မထင်ထားလို့ သွားမစားခဲ့တာ ဒီတခေါက်မှ သဘောတွေကျရတာအမှန်ပဲ။
ဈေးလား။ ဒီ ၂၂ ရက်နေ့ထိကို အချိန်လည်းမကန့်သတ်ထားတဲ့အပြင်၊ အဝစား၊ တစ်နေကုန်စားမှ ၉၆၀၀ ပဲကျမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုတောင် စားသင့်နေပြီလဲနော်။ အဲ့ Promotion က အမှတ် ၂၃၊နဝဒေးလမ်း ဒဂုံ(၁) ကျောင်းရှေ့က Jo Jo တစ်ဆိုင်တည်းမှာ ရတာနော်။ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိတဲ့။
အခရာကတော့ Hot Pot ဆိုင် ဂျင်းတွေများနေတဲ့ခေတ်မှာ တစ်ဆိုင်ပြီးတစ်ဆိုင် နာမည်ပိုကြီးလာတဲ့အပြင် မခိုပဲ သေချာအကောင်းစားတွေတည်ခင်းပေးတဲ့ Jo Jo ကို Hot Pot ဆိုင်ကောင်းကောင်း စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ပြီ။
ဒီလို Broke ဖြစ်တဲ့ ရက်တွေဆို စားချင်စိတ်ထိန်းမရသိမ်းမရဖြစ်လာရင် ၉၆၀၀ ကျပ်အပြီးအစီးနဲ့ ရတဲ့ Jo Jo ကိုသာ သူငယ်ချင်းတွေချိတ်ပြီးသွားစားဖို့ ညွှန်ပါရစေ။ ၂၂ ရက်နေ့ထိပဲမို့ အစားသမားတွေလက်မလွတ်အောင် အမီလာသတင်းပို့တာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ပုစှနျထုပျကွီးကွီး၊အသားလုံးကောငျးကောငျးနဲ့ Hot Pot တှထေဲ အတနျဆုံးဆို?
ရနျကုနျမှာ Hot Pot ဆိုငျတှမှေိုလိုပေါကျလာတဲ့အထဲ ကိုယျ့အကွိုကျနဲ့ထိမိပွီး၊ အသားကောငျးကောငျး၊ ပစ်စညျးကောငျးကောငျးသုံးတဲ့ မခိုမကပျအရသာကောငျးကောငျး Hot Pot ဆိုငျဆိုတာ ရှာရသိပျခကျတာပဲ။
ဒီကွားထဲ မထငျရငျမရငျသလို ပစ်စညျးပွတျတာ၊ အသားမစုံတဲ့အခြိနျတှေ စားမိရငျ ပေးရသလောကျမတနျတဲ့ ခံစားခကျြဖွဈမိကွတယျမလား?
ဒီ Hot Pot ဆိုငျကတော့ Hot Pot ဆို ဈေးကလညျး ကိုယျလိုကျမီအောငျ သကျသာရမယျ။ အဝစားလညျး စားခငျြတယျ။ အသားတှဆေိုလညျး တကယျ့ အလငျြမပွတျအောငျဖွညျ့ပေးတယျ။ အရသာလညျး မဆိုးဘူး။
အဓိကက အသားကောငျးတှသေုံးထားပေးတယျ…ဆိုတော့ကာ Hot Pot ဆိုငျကောငျးကောငျးလို့ ညှနျးရမယျ့အထဲ ပါတဲ့ဆိုငျလေးဆို စိတျဝငျစားကွမလား?
ဒီတပတျအခရာ က ညှနျပေးခငျြတာက လူတိုငျး တျောတျောမြားမြား စားဖူးပွီးတိုငျးကွိုကျကွတဲ့အပွငျ ဆိုငျခှဲတှအေမြားကွီးအောငျမွငျနတေဲ့ Hot Pot ဆိုငျပါ။
ဒီ Hot Pot ဆိုငျကို ကွှရေတဲ့အခကျြတှဆေိုရငျ-
အသားတှေ အမယျမြားပွီး လတျလတျဆတျဆတျရှိတာက စညှနျရမှာပဲ။ ကွကျသား၊ ဝကျသား၊ အမဲသား၊ အသားလှာတှေ၊ အသားနှပျတှေ၊ အသညျးတှကေ အစရတယျဆိုတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ။ ဪ…ပွီးတော့ အကုနျလုံးက လတျနတောပဲ။ Hot Pot ထဲထညျ့သောကျဖို့ ခပျပါးပါးလေးဆိုတော့ ရှယျပဲ။
အသားလုံးအကောငျးစားတှေ မြားတယျ။ ကိုယျတိုငျလုပျကွကျသားလုံး၊ ဝကျသားလုံးတှေ၊ ကွကျမှိုလုံး၊ ဝကျမှိုလုံးတှေ၊ အသားခြောငျးတှေ၊ အစာသှပျဥလုံး တျောတျောမြားမြားစုံစိနရေော။ ဒါအဝစားနျော။ ကွိုကျသလောကျစားပဲ။
အရှကျတှတေျောတျောမြားမြားစုံတယျ။ ရှပေဲရှကျတို့လို အရှကျတှပေါပါသေး။ မှိုတှလေညျးပါတယျ။
Side Dish တှေ ဗုနျးဗောလအောပေးထားတယျ။ ပုစှနျတနျပူရာကွျောတဲ့၊ ဝကျဆီကွျောတဲ့။ ထမငျးကွျော။ ခေါကျဆှဲကွျော။ ဖကျထုပျကွျော၊ ကွကျတောငျပံခြိုစပျကွျော၊ မနျထိုကွျော အဓိကက Side Dish ကိုက အစမခိုထားဘူး။
ဖြျောရညျတှေ ရှေးစရာမြားတယျ။ အခြိုပှဲဆို တရုတျအခြိုပှဲရှိတယျ။ ကြောကျကြော၊ ရခေဲမုနျ့ စားကောငျးတယျ။
အဓိက သဘောကမြိတာက အရညျရှေးစရာမြားတယျ။ ရသောသာ အရသာမြိုးမဟုတျဘဲ နဂိုအရညျကိုက အရသာကောငျးတယျ။ မီဆိုဟငျးရညျနဲ့ တုနျယမျးတော့အသောကျမြားကွတယျ။ အိုးကိုတဈယောကျတဈအိုးပေးတယျ။
ဝနျထမျးတှကေ အခြိနျပွညျ့ဘေးကနေ လိုတာဖွညျ့ပေးတယျ။ တကယျ့ကိုအဆငျ့မီမီစားရတဲ့ဆိုငျပါပဲ။
နရောအနအေထားနဲ့ဆို ရိုးရိုးပါပဲ။ အဆငျမပွတောကတော့ ယငျကောငျတှေ ဘယျကမှနျးမသိ ဝငျဝငျလာတာပဲ။
ဒီဆိုငျလေးနဲ့ နာမညျကို ထုတျပွောပွရမယျဆို Shopping Center တှမှော ဆိုငျတှအေမြားကွီးနဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ Jo Jo Hot Pot ပါ။ တဈခါမှ စိတျထဲ ကောငျးမယျမထငျထားလို့ သှားမစားခဲ့တာ ဒီတခေါကျမှ သဘောတှကေရြတာအမှနျပဲ။
ဈေးလား။ ဒီ ၂၂ ရကျနထေိ့ကို အခြိနျလညျးမကနျ့သတျထားတဲ့အပွငျ၊ အဝစား၊ တဈနကေုနျစားမှ ၉၆၀၀ ပဲကမြယျဆိုတော့ ဘယျလိုတောငျ စားသငျ့နပွေီလဲနျော။ အဲ့ Promotion က အမှတျ ၂၃၊နဝဒေးလမျး ဒဂုံ(၁) ကြောငျးရှကေ့ Jo Jo တဈဆိုငျတညျးမှာ ရတာနျော။ မနကျ ၁၁ နာရီကနေ ည ၁၀ နာရီထိတဲ့။
အခရာကတော့ Hot Pot ဆိုငျ ဂငျြးတှမြေားနတေဲ့ခတျေမှာ တဈဆိုငျပွီးတဈဆိုငျ နာမညျပိုကွီးလာတဲ့အပွငျ မခိုပဲ သခြောအကောငျးစားတှတေညျခငျးပေးတဲ့ Jo Jo ကို Hot Pot ဆိုငျကောငျးကောငျး စာရငျးထဲ ထညျ့လိုကျပွီ။
ဒီလို Broke ဖွဈတဲ့ ရကျတှဆေို စားခငျြစိတျထိနျးမရသိမျးမရဖွဈလာရငျ ၉၆၀၀ ကပျြအပွီးအစီးနဲ့ ရတဲ့ Jo Jo ကိုသာ သူငယျခငျြးတှခြေိတျပွီးသှားစားဖို့ ညှနျပါရစေ။ ၂၂ ရကျနထေိ့ပဲမို့ အစားသမားတှလေကျမလှတျအောငျ အမီလာသတငျးပို့တာ ဖွဈပါကွောငျး။